Forum serasera malagasy dia mbola sanatria ve voazanaka faona e? - Dinika forum.serasera.org
dia mbola sanatria ve voazanaka faona e?
Fitohizan'ny hafatra : dia mbola sanatria ve voazanaka faona e?
Georgekely - 22/02/2013 05:10
ny tiako hifampizarana amintsika tsy rehetra an-kanavavaka dia toy izao : raha nanaraka vaovao tao amin' ny fahitalavitra aho alina (Alakamisy 21/02/13) - momba an' ireo mpiasam-panjakana Administratreur civil (miala tsiny amin' ny teny frantsay) - lehiben' ny Distrika, dia mbola gaga mahita an-drizareo manao fanamiana toe ireny. Raha ny fahatadidiako dia tamin' ny fotoan' andro ny fanjanahan' ny frantsaay teto amintsika no nasaina nitondra an' ireny fanamiana ireny ny ambaratonga pitondrana - ohatra nanomboka tany amin-dry Ragova sy sy midina rehetra. Ny antony moa tamin' izany fotoana izany dia ho fanavahana eo amin' ny vahoaka ny andraikitra nomena an-dry zareo, sady misy nisy hevitra hafa nofonosin' ireo mpanjanaka. Dia gaga sy malahelo ny tena raha amin' izao vanin' andro izao -50 taona nahazoana FAHALEOVATENA MADAGASIKARA - dia mbola salorana ihany ireny fanamiana ireny - nefa ry zareo tompony, frantsay io, dia tsy manao azy intsony. Dia variana ny tena. Efa ela moa no saika ampitaiko amintsika rehetra ity hevitra mandalo tato amiko ity - soa fa nisy ny serasera vavahady. Dia manao mandram-piaona, samy ho tahian' ny TOMPO daholo.
sitlo - 19/03/2013 12:44
Mbola voazanaka ka. Ny tenin'ny matanjaka ihany no marina hoy La Fontaine izay.
Raha te hanohitra dia ataovy toy ny nataon'ny sinoa tamin'ny mongolianina fahiny. Ny tenanao no hatanjao voaloha na ara-tsaina na ara-batana na ara-pahalalana. Dia avy eo haka tahaka anao ny manodidina anao.
tanimamiko - 15/07/2013 10:46
[/quoteMangataka fiaraha miasa re @ fanakanana ny fidiran i Basy maro antsokosoko eto @ tany mamiko/fiarahamiasa @ la douany Diego,polisy sy zandary,la douany Antananrivo @ famoahana devise maro antsokosoko(vidimbasy) fa raha tsy io ireo olona ireo no fongorina aloha tsy hilamina ny vahoka madinika ambanivohitra ;Ny mpamatsy de miondana euros satria mandeha ny bizna miaraka @ vazaha , ny vahoka madinika @ zone rurale surtt mandry andriran 'antsy.Fa sady mikombombava noho ny fatahorana ireo mpanao bizna miseho mahavovidy vola ny manampahefana sy ny zandary.ho fandraisako anjara de hanome ohatra iray aho de olona mampiditra basy (basimborona sy pistolet amanjatony /taona, mampiditra 2 na 3 fois /an.Ary tena mirehareha manana euros: